Breaking: ओली पक्ष र नेपाल पक्षको बार्ता सकियो , के भयो सहमति ? - Rising Dainik
March 15, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on Breaking: ओली पक्ष र नेपाल पक्षको बार्ता सकियो , के भयो सहमति ?
काठमाडौं-ओली पक्ष र नेपाल पक्षको धुम्बाराहीमा जारी बार्ता सकिएको छ ।श्रोतका अनुसार बार्ता सकारत्मक भएको बताईएको छ ।धुम्बारहीमा भएको वार्ता करिब १ घण्टा चलेर सकिएको हो ।प्रधानमन्त्री ओली र बरिष्ठ नेता नेपालबीच करिव ४ महिनापछि भेटवार्ता भएको हो।
एमाले मुख्यालय धुम्बाराहीमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई समान है’सियतमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । उनीहरु उस्तै कुर्सी, टेबल र उही लाइनमा बसेका थिए । नेकपा कायम रहँदासम्म त्यहाँभित्रको कुर्सी व्यवस्थापनलाई लिएर वि’वाद हुने गरेको थियो।
त्यसमा नेपालले पनि प्रश्न उठाउने गरेका थिए । माधवकुमार नेपाल प्रतिनिधिसभा वि’घटन भएपछि पहिलो पटक पार्टी कार्यालय धुम्बारही पुगेका हुन । पछिल्ला दिनमा एमाले विभाजनतर्फ उन्मुख भएका बेला दुई पक्षबीच संवादहिनताको अवस्था थियो।
ओली पक्ष र नेपाल पक्षको छलफलबाट बाहिरीए नेता रघुजी पन्त
December 4, 2020 Ramash Kunwar
ग’र्भनि’रोधक चक्कीसँगै कण्डम पनि प्रयोग गर्नुपर्छ ?
September 20, 2020 Ramash Kunwar
भागरथी ह’ त्या प्र’करणमा सफल अनुसन्धान गर्ने दुई प्रहरीको बढुवा